Voasambotra ny mpamatsy sy ireo mpidoroka: 60 000 Ar ny ivarotana ny daozina « héroïne » iray | NewsMada
Mahazo vahana ny fidorohana zava-mahadomelina mahery vaika, amin’ny alalan’ny fitsindromana “héroïne”. Tovolahy dimy voasambotry ny polisin’ny Fip ao Toamasina, miaraka amin’ny mpivady mpivarota sy ny mpamatsy azy ireo.
Tovolahy miisa dimy samy mipetraka ao Valpinson sy ao Ambohijafy ary ao Andranomadio Toamasina sy ireo mpivady monina ao Andranomadio, mpivarotra “héroïne” no tratran’ny polisin’ny Fip ao Toamasina, afakomaly. Heloka anenjehana ireto olona ireto ny fitsindronana zava-mahadomelina mahery vaika “héroïne” sy ny fivarotana izany. Tsikaritra nandritra ny fisamborana ireto olona ireto, efa feno dian’ilay tsindrona ny tanan’ireo tanora dimy lahy ireo. Manodidina ny 19 taona ka hatramin’ny 23 taona ny salan-taon’ireto tanora ireto, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy. Tratra niaraka tamin’izy ireo tamin’io fotoana io koa ny raim-pianakaviana iray 50 taona mpivarotra “héroïne” ao Toamasina sady mitsindrona ihany koa. Fantatra fa efa ho 15 taona nitsondrona “héroïne” ity raim-pianaviana mpivarotra “héroïne” ity. Nilaza izy, nandritra ny famotorana nataon’ny polisy, fa mahatratra 60 000 Ar ny daozy iray 5 ml fampiasan’ireto olona ireto. Ny fanendahana sy ny halatra ao an-tranon’izy ireo ary ny fanampiany ity raim-pianakaviana ity manaparitaka izany ny fomba ataon’ireto tanora ireto ahazoana vola hividianana izany. Intelo isan’andro izy ireo no voalaza fa mitsindrona.
Teny Ambodin’Isotry no nivarotra voalohany…
Mbola nahatrarana ireo fitaovana fandorana ny “héroïne” sy ny fitsindrona izany koa tany amin’ireto andiana tanora mpitsindrona “héroïne” ireto nandritra ny fisamboran’ny polisy azy ireo. Voalaza fa mbola misy tanora efatra naman’izy ireo mpitsindrona ity zava-mahadomelina mahery vaika ity koa ifampitadiavana amin’izao fotoana izao ka ny roa amin’izy ireo, zanaka mpandraharaha ao Valpinson sy zanaka mpitandro filaminana izay mpamatsy ny namany amin’ny fotoana filàna izany maika. Ankoatra izany, araka ny fanazavan’ilay raim-pianakaviana mpivarotra “héroïne”, tao Ambodin’Isotry no nanombohany nitsindrona sy nivarotra ity zava-mahadomelina mahery vaika ity, 15 taona lasa izay ka fanitarana ny tsenany ny nifindrany ao Toamasina ny taona 2015. Nambaran’ny polisy fa isan’ny antony iray mampirongatra ny fanendahana sy ny vaky trano ao Andranomadio sy ao Ambohijafy ary ao Valpinson ny fitsindromana “héroïne” tahaka izao satria voalaza fa manome hery sy fahasahiana rehefa avy mitsindrona izany.